DTS-10, 1103,1106, PL-310 na nnabata nnabata Fuzhou FM, MW, SW - CZH / Fmuser Fm Transmitter China Supplier Kpọtụrụ: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyue99991
home » DTS-10, 1103,1106, PL-310 na Fuzhou nnabata ime ụlọ FM, MW, SW
Mgbe ọkara elekere abụọ gafee elekere abụọ na Jenụwarị 1 ndị ọrụ mpaghara ga-abụ DTS-10 sq gafere m ozugbo batrị na sq na-egwu ọkara otu elekere, n'oge na 1103,1106, PL-310 tụnyere FM, MW na kọmputa ịnata. Ike nnyonye anya mgbochi mgbochi, ike ịnabata echiche mbụ 1103FM na DTS-10, MW dị nha, ikike mgbochi mgbochi DTS-10 na 1103 n'ozuzu, 1106, PL-310 na ụgbọ elu abụọ adịghị, DTS-10 bụkwa mmetụta a na-enwekarị ụda mara mma. Sq hapụrụ m Chengxing site na elekere 15 nke ehihie na 00, PL-1103,1106-by-ntụnyere ugboro ugboro FM na-enweta njedebe ruo mgbe elekere 310:22 nke abalị. Jenụwarị 30 ruo nke ehihie na 3:2 na nke anọ site na otu ugboro iji nata MW na nnabata SW iji (ntụnyere SW ugboro-site-isi abụghị). Emere ka ihe di iche na ndi nke ato mechie, n'ụtụtụ nke 30 nke ụtụtụ 4 na igwe gafere. Okwu izizi na-esote obi mmetụta mbụ nke DTS-4:
DTS-10 Mgbe m meriri ogo ya karie n’echiche m, enwere ike ibu oke ịkọwa oke nke obere cassette, ọdịdị, na -eme ka mma ha dị mma, mmetụta siri ike dịkwa mma, ezigbo ma dịkwa mma. Ngosipụta LCD bụkwa ọtụtụ ihe ngosipụta windo, gụnyere ugboro, ike mgbaama, ọwa na okpukpu abụọ, ọwa sara mbara, okpomoku, wdg, na nlele, bọtịnụ ahụ na-adị n'usoro, ebe ndị ọrụ na-arụ ọrụ, ugboro ole akara aka, na-adaba adaba; Enwere ssb nwere mmeghari ụda na olu dị ala, na-agbanwe agbanwe; ngosipụta nke okpomoku na echiche ohuru; njupụta nweta akara dị mfe iji; bọtịnụ ogbi, na ịdị mma nke ekwentị na oge na-aga ogbi; ntụgharị ụda olu nwere ike ịdị mma; Igha azu, abali, odi nfe iji rụọ ọrụ, bọtịnụ a na - achagharị achagharị n'abalị adịghị ọchịchịrị ịchọta nkeji.
Ma enwerekwa adịghị ike, ma ọnwụnwa abụọ ahụ, anyị kwesịrị ịkọ maka ebumnuche maka ebumnuche, njirimara nke mbụ anjan akwụkwọ mmado agbagọ, na-enye mmetụta nke adịghị njọ. Ọrụ nke abụọ, olulu wiil ahụ na-adọba ụgbọala enweghị ike inye dị ka ICOM-R71E mkpịsị aka Anzhuo na-atụgharị ntụgharị, dịka Taiwan, na enweghị echiche na-emebi emebi, enwere m mmetụta karịa astringent. Nke atọ, ogwe na obosara nke ọkpọkpọ mkpọda mkpọghị agbanwe agbanwe na oge ka enwe "mmetụta"; mechara chọta ụbọchị atọ, ma ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí, ngosipụta okpomọkụ bụ ogo 16-18 mgbe niile, dịka ụlọ, ihe ngosi PL-310 na-agbanwe ngwa ngwa. Onyinye ihu LCD n'azụ, enwuru aka ekpe-ọchịchịrị, akanri LCD kariri. Enwere ike ịhụ akụkụ site na ebe a na-ekwu okwu mkpọchi n'ime ụlọ ahụ, gbakwunye akwa mkpuchi nke ájá. Inye ike AC, mkpọtụ mụbara nke ukwuu. Ohere maka ndozi.
N’isochi ịbanye n’inye ihe karia, n’ihi na amachaghị m ssb sistemu; m na-enweghị mgbaama ọwụwa ogologo oge, yabụ naanị ntụnyere FM, MW, SW. Ebe ọ bụ na ụbọchị 1, dị nnọọ a aka 1103,1106, PL-310, PL-737 igwe anọ (na nkeji), yabụ na-atụnyere ọnụ, n'ihi na steeti na PL-737 mwepụta ụbọchị bụghị tupu karịa.
Iji lee foto nke DTS-10, 1103,1106, PL-310 tinye ọnụ
【Ebumnuche】 iche DTS-10, 1103,1106, PL-310 ịnata FM, MW, SW band
Environment 】zọ a na -ege ntị: FMlọ ntụnyere FM na 15 ụlọ dị n'okpukpu nke atọ, tebụl ime ụlọ dị na north
MW, SW dị iche na ụlọ dị okpukpu 10, okpukpu nke atọ, tebụl ime ụlọ dị na north
1.1103 maka ụdị njikọ anọ nke FM, kwesịrị ịbụ nke kachasị ọhụrụ. 1106, PL-310 karịrị ọkara azụtara ọhụrụ. DTS-10 batrị arụnyere iji gee ntị.
2. Tụnyere nke anyon ụtarị mgbe ụgbọ elu anọ dọtara, nke ahụ bụ obodo kachasị ogologo. Echere m na nke a bụ ndị na-emepụta ihe na ụgbọ elu ụgbọ elu iji nweta oge kachasị mma, yabụ steeti a PK nwere ezi uche.
3. E tinyere ntụle nke ihe ndị dị ugbu a FM n'otu igwe na igwe ọ bụla; iche MW, SW e oge na-ezighi ezi emeghe, ka ị ghara itinye aka na ibe ya, gbanwere ebe mgbe enwere obi abụọ; Ngwa igwe anọ oge ọ bụla otu n'ime igwe ndị a ga - ekwe ka buut, nke ọzọ gbanyụọ, iji zere itinye onwe ya na ibe ya.
Nsonaazụ】 1, otu FM
Naanị atụnyere 87.5-108.0MHz, oge 0.5MHz na-amalite site na 87.5 MHz iji aka gị chọọ ugboro ugboro redio na-erughị 87.5 MHz. Taiwan atulela otu ike adịghị ike ahụ nsonaazụ kacha mma.
1. Nke mbu, ozugbo onodi uzo nke mpaghara siri ike: 87.6MHz, 88.3 MHz, 89.3 MHz, 90.6 MHz, 91.3 MHz, 92.6 MHz, 93.5 MHz, 94.4 MHz, 96.1 MHz, 98.7 MHz, 99.6 MHz, 100.7 MHz , 103.6 MHz, 107.1 MHz. Anabatara igwe eji anọ, nke a na-atụ anya n’ime, ụda DTS-10 dị oke mma, naanị ịnụ nku na-adịghị ahụ anya, na-emikpu n’ime egwu, dị ka igwe paradise na-efe efe. Achọpụtara tupu ihe mberede ahụ amabeghị Taiwan 88.3 MHz, mgbaàmà siri ike, dịka ọdịnaya natara 98.7 MHz, ụgbọelu anọ anabataghị, enyoghi enyo.
2. Site n’otu n’otu jiri aka gị chọọ usoro redio, achọtara n’ọtụtụ oge ikuku na-abụghị DTS-10 nwere ụdị mpaghara 98.7MHz siri ike gbaga na Taiwan, ụda ahụ pere mpe, mkpa idozi olu nwere ike ịnụ nke ọma, ebe 1103 abụghị ihe ịtụnanya dị otu a, 1106, PL-310 nwere n'ezie ihe a, mana ọ na-egosi obere oge. N'ikpeazụ chọta 100.10 MHz, 101.50 MH, 101.70 MHz, 103.00 MHz mgbaàmà adịghị ike na Taiwan anọ. 100.10 MHz maka mgbasa ozi Taichung, Taiwan ICRT; 101.50 Amaghị m ebe m ga-agbasa, mana otu ọdịnaya nke 98.7, anabatụrụ ụgbọelu anọ, enyoghi enyo dịka enyo; 101.70 MHz maka Fujian Ningde Radio Voice, nyocha ịntanetị ntakịrị, Adreesị: Mpaghara Mpaghara, Ping Tong Kiu Okporo Nzọ Ningde Tacitus, ala dị 113.2 km, kilomita 77 site na mbara igwe, n'ezie na nyocha Baidu “Ningde Radio nke Ndị mmadụ” ibe nke ihu akwụkwọ mbụ nke akwụkwọ mmado ga - ahụ maka 2006 m Mepee Njikọ obi ụtọ. 103.00 MHz maka Mpụga Traffic nke Putian, anya ala dị 114.5km, ihe dịka 80km site na ahịrị elu igwe.
N'ụzọ na-akpali mmasị, na usoro ịnata 101.50 MH, n'amaghị ama metụaka antenna 1106 DTS-10, na mberede olu 1106 dị elu nke ukwuu, nwale antenna 1106 dị na mmịpụta DTS-10, ebe isi ihe dị, 1106, obere olu na mberede na-ada oke ụda ma sie ike nke ukwuu, na-ewepụ stereo, na-anaghị enweta ntakịrị mkpọtụ, ọtụtụ nnwale ndị a na-eme ugboro ugboro bụ na, ebe igwe atọ ndị nke ọzọ enweghị ihe ịtụnanya dị otú a, na ụzọ a iji nweta 101.50 MH merie nke ọzọ 3 igwe, ihe ịtụnanya. Agbanyeghị, 100.10 MHz, 101.70 MHz, 103.00 MHz mmetụta adịghị ka nke a pụta ìhè, echere m na ọnụ ụzọ ya dị oke elu, ozugbo ike mgbaàmà gafere n'ọnụ ụzọ, nwere ike ịbụ ezigbo onye nnata, ka ọ na-atụgharị uche maka ọdịnihu.
Nke abuo, ngalaba mbufe
Kemgbe 531-1710KHz, redio redio 9KHz ọ bụla na-achọpụta ma zute dị iche na nkeji ndị na-adịghị ike, a na-ege ntị ugboro ugboro, DTS-10 ugboro ugboro warara obosara, na-agbanwe njikwa uru AM.
Mpaghara dị ike: 540 KHz, 585 KHz, 603 KHz, 666 KHz, 720 KHz, 801 KHz, 882 KHz, 1332 KHz, 1404 KHz, 1557 KHz igwe anọ iji nagide ahụ iru ala ugbu a, mana DTS-10 ka AM na-achịkwa egwuregwu. na olulu elu 2/3 dị elu ma dị ala iji mechie bandwidth kachasị maka igwu egwu na brọdband, mgbe ọ dị ka ịge ntị na FM, na-agbakwunye nke ahụ, mara mma.
Na njedebe dị ala na Poland, 648 KHz Guangdong Radio, 729 KHz Jiangxi na-agbasa ozi, 774 KHz na 4 na Hubei People Radio nwere ike ịnweta, mana DTS-10 na 1103 ụda olu buru ibu, mgbaàmà siri ike, DTS-10 ụda dị mma, mkpọtụ azụ dị ala, gee ntị na klaasị nwee klas ahụ; 1103 nzụlite dị n'okirikiri karị, na-ege ntị nke ọma. 1106, PL-310 nwere ike ịnata redio n’agbanyeghi, ma mkpọtụ ukwu ahụ, nke ukwuu Naiting, ọkachasị na 1106 mkpọtụ dị ukwuu, enweghị ike iguzo.
Ugboro oge: 1116 KHz Central People Radio Voice of China (Taiwan a) na-ege ntị na njedebe ala ala Poland n'ihi nke a, anụghị n'ihi Taiwan ndị ọzọ adịghị ike edekọtara.
Njedebe: Mgbatị ahụ 1494KHz na Bekee, bụ jazz; 1503KHz na-asụ asụsụ Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, aghọtaghị ya; 1530 bụ ụlọ ọrụ redio Voice of the City of Zhejiang dị na Hangzhou, na-agbasa ozi, ogologo ala dị 687.8 km, 470.6km ogologo nke mbara igwe; karịa 3 nkeji yiri, na dị iche na mbụ, 1103 ige ntị dị mma, doo anya ma nụ olu, mkpọtụ ndabere dịkwa ukwuu, DTS-10 nwere ike listenaa ntị nrịbaama, mkpọtụ, pere mpe karịa 1103, mana mgbama na-ebelata oge nwụọ, mkpọtụ dị ala na-enweghị ike ịchọta olu ahụ ntakịrị, yabụ ọ ga-akpọ ụmụ akwụkwọ German200 AM1 elu, guzobe isi, mgbaaka iru mkpụrụ ndụ 2-XNUMX, ma mesịa nwee olu.
1106, ikpe PL-310, mgbe ike mgbaama mkpọtụ, mgbaama ahụ adịghị ike, ọ nụghị obere olu, mara mma 1106, ntakịrị ike karịa PL-310 Sheung Wan adịghị mma karịa.
Ihe dị iche na ntinye anya na abalị elekere anya nke ụtụtụ nke ụtụtụ, TOSHIBA's RP-1F ga-ewepụkwa otu ugboro ga-anata ya ọzọ, ụfọdụ ọdụ agbaala ikuku, mana ọkachasị na agbasa ozi nke mkpokọta nchịkọta dị elu. mmetụta nke 10 nkeji na 770 Ẹkot, ma dịtụ obere mkpọtụ karịa 3, chere na obere Japanese n'ezie obi ike,
Nwa atụrụ, ezi AM ụgbọ ala were ụgbọ elu pụọ na asọmpi, SANYO's F7100A, batrị maka ike, coil isi nke ejikọtara ya na mpaghara ihe ndọta, karịrị otu ugboro a ga-anata ụda olu doro anya na ọfụma. ezigbo, ịtụnanya! N'akụkụ isi ihe.
III. Nnabata Shortwave
Ebe ọ bụ na enwere obere oge, were ihe karịrị otu elekere ruo elekere abụọ nke ụtụtụ iji tụlee obere ụda mmiri, n'ụtụtụ nke anọ, ma atụlee ya. Anaghị anabata igwe elekere anọ dị na redio obere mkpụmkpụ, bụ nnyonye anya elektrọnik, nanị site na ntanetị mgbasa ozi mba ụwa na B2 Mandarin nke Oge na Ndepụta Ogologo (Ọgụgụ 30) ịge ntị, ịnata igwe anọ ahụ nụrụ ya. , anabataghị Ihe ndị a natabeghị, mana edepụtaghị ha, mana arụmọrụ nke igwe anọ dị iche iche, mkpọtụ ụda DTS-4 dị ala, ụda dị mma karịa nke ọma Naiting 09, PL-26 na-eme mkpọtụ, ọ bụghị Naiting.
Na imechi adịghị ike na Taiwan, 5840KHz, 5925 KHz 1103 maka larịị nke na-ege ntị, DTS-10 bụ ihe atụ doro anya, na-ege ntị, 1106, PL-310 abụchaghị isi. 9530 KHz, 9605 KHz 1106, ụda PL-310 dị obere na mkpọtụ, ọkachasị olu 1106 nke mkpọtụ dị egwu, enweghị ike iguzo.
Folk Taiwan ka bụ otu ihe.
1. FM Gee ntị: DTS-10 ≈ 1103> PL310 ≥ 1106, mana mmeri 1103 na nghọta nke ntakịrị nhọrọ na-ahọrọ karịa DTS-10. Gee nti ụda DTS-10 dị n'ihu, yabụ, ụdọ nwere 1103. PL310 na 1106, ebe ọ na-esighi ike, mana arụmọrụ nke DSP nwere ezigbo ọfụma.
2. MW na-ege ntị: 1103 ≈ DTS-10> 1106 ≈ PL310, 1103 meriela naanị na Poland elu-ọgwụgwụ obere, mana ezigbo ụda dị mma na mkpọtụ dị ala na DTS-10 na azụ, ya mere ihu ọma ya na 1103. PL310 na 1106 dịtụ ala, ọbụlagodi 1106 ịnata ike na PL310, mana ụda ahụ na-ada, mkpọtụ, ekpughere ya kpamkpam, ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere PL310.
3. Ige ntị Shortwave: N’ihi nsogbu oge, ọ bụghị 5KHz na-atụnyere ugboro ole ọ bụla, nsonaazụ ya bụ 1103> DTS-10> PL310 ≈ 1106, mana mgbama ahụ siri ike karịa nke DTS-10 nwere ntụsara ahụ nke ọma. 1106 nwụrụ n'ime mkpọtụ ahụ, ọ dị oke njọ, nwụrụ na mkpọtụ nke mgbaama.
Na nchịkọta, DTS-10 bụ nnukwu uche na igwe dị mma, ọ bara uru ịnwe ya. 1103 bụ igwe dị ịrịba ama nke igwe ọhụrụ ahụ siri ike ịgabiga karịa na arụmọrụ n'ozuzu ya. PL310 dị ka igwe dị mma, ọnụahịa dị ala, obere ihe na obere mkpanaaka, mana o mere mkpọtụ na mmetụta dị oke mkpa. 1106 bụ mao nke okpu nke, mana atụmatụ ahụ bụ ihe jikọrọ yinye, n’elu ya wee na-aga n’ihu imechi m, ma ọ bụrụ na enwere ike wepu ndabichi ahụ kwesịrị ịbụ ezigbo igwe.
N’ụzọ dị mwute, otu obere igwe dị na Japan erutela n’elu nnukwu afọ ole na ole gara aga. Nwere olile anya na azụmaahịa redio anyị gara n'ihu.
Ndị ọrụ ga-achọ ịkele igwe musicradio maka mmadụ niile ịgbalị inye. (Ntụle bụ ihe onwe onye na - enwe ntụrụndụ, nke rụpụtara naanị n'aka aka, apụtaghị na ụdị ndị a niile)